Panasonic DVD burner: Olee Ọkụ Panasonic Video ka DVD n
> Resource> DVD> Panasonic DVD burner: Olee Ọkụ Panasonic Video ka DVD
Chọrọ ọkụ Panasonic igwefoto E ka DVD ma ike ịchọta onye kwesịrị ekwesị DVD burner? Ebe a, m ji obi umeala nwere ike ikwu Wondershare DVD Onye Okike. Ọ ga-abụ oké inyeaka iji tọghata gị Panasonic vidiyo na niile igwefoto ụdị DVD na magburu onwe ya mma na àjà ihe ọṅụṅụ ngwa ngwa ọsọ. N'ihi ya, i nwere ike chebe ha ruo ogologo oge na-abịa ma na-ekiri ha na ọ bụla mgbe DVD Player na gị na ezinụlọ gị ma ọ bụ enyi.
Mgbe ị na-ahọrọ na ya, ị ga-ahụ na ọ bụ n'ezie otú mfe ike DVD Ọkpụkpọ na DVD diski gị Panasonic videos. Na-eme ahaziri DVD menus, atọ ebelata, na-akpali watermark bụghị ihe siri ike. Ọ bụrụ na ị na-achọ tinye ụfọdụ photos ike a ngosi mmịfe, ọ na-apụghị-adị mfe na nke a ọkachamara DVD ọkụ software. Dị nnọọ nwere a na-agbalị! Download usoro ihe omume ma na-agbaso nduzi otiti. Ọ bụrụ na ị a Mac onye ọrụ, biko ịmụta Wondershare DVD Creator maka Mac isure Panasonic E ka DVD na Mac OS X (Mountain odum gụnyere). Nzọụkwụ bụ otu, dị nnọọ jide n'aka na ị ga-esi nri version.
1 Ibu Ibu Panasonic isi iyi videos
Dị ka ịrụ ọrụ nke ọma ma dị mfe iji Panasonic burner, ị ga-ahụ na ọ kemgwucha enyi na enyi na-eji, ọbụna site nzọụkwụ mbụ. Ị nwere ike tinye Panasonic obere vidiyo na photos ozugbo na ihe omume ahụ site ikpuru-n-dobe. Alternatively, pịa "+" button ịnyagharịa gị faịlụ foder na mbubata ha.
Atụmatụ: Ọ bụrụ na ị chọrọ iji hazie dị iche iche ịke mkpachị n'ime onye ngalaba, ị nwere ike ịmepụta ọzọ utu aha site na ịpị "Tinye utu aha" button. Mgbe ahụ, ịdọrọ gị chọrọ clip n'ime ọhụrụ aha.
2 Dezie Panasonic faịlụ (nhọrọ)
Akụkụ ọzọ nke a Panasonic DVD burner bụ na ọ na-enye adaba edezi ọrụ nke na-enyere i metụ elu mmepụta DVD video conveniently. Chetara a clip na pịa pensụl na akara ngosi, ị ga-abịa na edit window. Ebe a, fọrọ nke nta niile nkịtị edits bụ kemfe, gụnyere n'usoro n'usoro, trimming, cropping, kpatụ video mmetụta, na-agbakwunye watermark ma ọ bụ ndepụta okwu.
Maka foto ngosi mmịfe faịlụ, i nwere ike ịgbanwe ederede, mgbanwe, n'okirikiri na ngosi mmịfe edit window. Cheta na: niile mgbanwe nwere ike ikpe na ezigbo oge preview window.
3 Malite Panasonic DVD ọkụ
Ugbu a ọ bụ oge mbupụ gị Panasonic vidiyo na DVD. Pịa "Ọkụ" taabụ ka ịnweta apa ọkụ window, na ahụ setịpụrụ na-ere ọkụ mbanye, TV ọkọlọtọ, wdg Mgbe ahụ, fanye a DVD-R ma ọ bụ DVD + R diski na iti Ọkụ ka a Panasonic DVD burner na-elekọta ike.
Atụmatụ maka ọkụ Panasonic video DVD:
Tupu ị ọkụ Panasonic video ka DVD, ị nwere nyefee gị dere footages na kọmputa mbụ. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu banyere nke ahụ, biko rụtụ aka na isiokwu a: otú nyefee Videos si camcorder ka Computer.
Nke a Panasonic DVD-ere ọkụ software ga-akpaghị aka tinye ya ndabere DVD menu ike gị DVD diski. Iji mee ka ọ na ihe personlized, ị nwekwara ike bulie ọkacha mmasị gị otu onye si n'elu 50 template ekwekọghị na n'ihu hazie ya. N'ezie, "Ọ dịghị menu" bụkwa dị ka ide.
Iji jide n'aka na mmepụta DVD diski-arụ zuru okè na gị DVD ọkpụkpọ, ọ dị mma iji họrọ a DVD disk na-ahazi ka gị DVD ọkpụkpọ. Otú ọ dị, ọ bụ nakwa amamihe dị họrọ a nkịtị DVD-R, n'ihi na ọ bụ ukwuu dakọtara na kasị mgbe DVD Player dị taa.
Ọ bụ ya! Gbalịa a Panasonic DVD burner ike gị n'ụlọ DVD ugbu a!